Its About Choices (2020) | MM Movie Store
Its About Choices (2020)
အတိတျကအမညျးစကျတှကွေောငျ့ တကျစီမောငျးပွီးလေးနှဈလုံးပုနျးနရေတဲ့သူနဲ့ သူ့ကိုလေးနှဈလုံးလိုကျရှာနတေဲ့သူ နောကျဆုံးမှာ တှကွေ့တဲ့အခါ… တဈနာရီခှဲကွာတဲ့ဒီကားကို မငျးသား Nehesh Poll ကိုယျတိုငျပဲရိုကျကူးသရုပျဆောငျထားပါတယျ..
Cast နညျးနညျးနဲ့ စိတျဝငျစားဖို့ကောငျးအောငျ ရိုကျပွထားပွီး အသကျရှငျဖို့ရှေးမလား မှနျတာကိုလုပျမလား အစရှိတဲ့ရှေးခယျြမှုတှေ ဒှိဟတှေ မေးခှနျးတှကွေားမှာ သူဘာကိုရှေးမလဲ ဘာလုပျမလဲဆိုတာကို ရငျတထိတျထိတျနဲ့ကားဆုံးထဲအထိဆှဲချေါသှားမယျ့ဇာတျလမျးမြိုးဖွစ်ပါတယ်
အတိတ်ကအမည်းစက်တွေကြောင့် တက်စီမောင်းပြီးလေးနှစ်လုံးပုန်းနေရတဲ့သူနဲ့ သူ့ကိုလေးနှစ်လုံးလိုက်ရှာနေတဲ့သူ နောက်ဆုံးမှာ တွေ့ကြတဲ့အခါ… တစ်နာရီခွဲကြာတဲ့ဒီကားကို မင်းသား Nehesh Poll ကိုယ်တိုင်ပဲရိုက်ကူးသရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်..
Cast နည်းနည်းနဲ့ စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းအောင် ရိုက်ပြထားပြီး အသက်ရှင်ဖို့ရွေးမလား မှန်တာကိုလုပ်မလား အစရှိတဲ့ရွေးချယ်မှုတွေ ဒွိဟတွေ မေးခွန်းတွေကြားမှာ သူဘာကိုရွေးမလဲ ဘာလုပ်မလဲဆိုတာကို ရင်တထိတ်ထိတ်နဲ့ကားဆုံးထဲအထိဆွဲခေါ်သွားမယ့်ဇာတ်လမ်းမျိုးဖြစ္ပါတယ်
The Good Doctor (Season 3) ၊ အပိုငျး (၁၃)
The Good Doctor (Season 3) ၊ အပိုငျး (၅)
The Concubine – Link 3